Google Earth သို့ UTM ၏သြဒီနိတ်များမှ Geofumadas သို့ပို့သည်
UTM သြဒီနိတ်မှ Google Earth မှ Excel,
ဖေဖော်ဝါရီလ၊ 2012 downloads,, အသားပေး, Google Earth / Maps ကို
ငါကိုငါယူပါတယ်ဓါတ်ပုံများ၏စုံတွဲတစ်တွဲအပါအဝင်အောက်ပါ table ထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအိမ်ခြံမြေလယ်ကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့် Google Earth ကိုအလိုဆန္ဒထဲမှာကြည့်ရှုရန်သွား၏
အဆိုပါ template ကို၏ပါရမီတဦးတည်းမသည်:
ပြောင်းလဲ UTM သြဒီနိတ်ဒဿမ format နဲ့ပထဝီ, က Google ကိုလိုအပ်သည်ကားအဘယ်သို့သောကွောငျ့
ဒါဟာသင်ဦးတည်ရာဖိုင် name ကိုတင်ထားရန်ခွင့်ပြု
ဒါဟာ KML ၏ layer အမည်ကိုခွင့်ပြု
ထိုသို့သောစသည်တို့ကိုပုံများ, hyperlink များသကဲ့သို့, ဖော်ပြချက်ထဲတွင် HTML tag တွေကိုသုံးခွင့်ပြု
အဆိုပါ template ကိုပု spheroid အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာ WGS84 Google Earth ကိုရှေးခယျြရမညျဖွစျကွောငျးသိရှေးခယျြထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမဦးဆုံးကော်လံမှာတော့ကျနော်တို့က Google အဖြစ်ပြသပါလိမ့်မယ်သောဒေတာများရိုက်ထည့်ပါ တံဆိပ်.
လာမည့် UTM ကိုသြဒိနိတ်နှစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ system သည်ကော်မာနှင့်အချက်ကိုဒthousandsမကိန်းခွဲအဖြစ်ထောင်ဂဏန်းခွဲခြားသူအဖြစ်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားကြောင်းဂရုစိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် 599.157,90 ကဲ့သို့သောသြဒီနိတ်ကို 599157.90 အဖြစ်ရေးသားသင့်သည်ကိုခွင့်မပြုပါ
လာမယ့်ကော်လံထဲမှာကျနော်တို့ဇုန်ရိုက်ထည့်ပါ။ ၎င်းကိုပထမစာကြောင်းတွင်ထားခြင်းအားဖြင့်အခြားသူများကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ဒေတာများသည်ဇုန်နှစ်ခု၏ကန့်သတ်ချက်တွင်ရှိပါက၎င်းတို့ကိုကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အလားတူပင် hemisphere; ဒီကိစ္စမှာငါဘိုဂိုတာကဒေတာကိုသုံးတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဇုန် ၁၈ နဲ့မြောက်ခြမ်းကိုသုံးတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာ Google Earth ကိုအမှတ်မှာနှိပ်လျှင်ငါတို့မြင်မယ်လို့ကားအဘယ်သို့သောဖော်ပြချက်။
Google Maps ကိုဤသြဒီနိတ်တင်ခြင်း, ပြီးတော့ Google Earth မှသူတို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်
အဆင့် ၁ - ဒေတာထည့်သွင်းမှုပုံစံကိုကူးယူပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့တတ်နိုင်သမျှပုံမှာပြထားတဲ့ပြီဥပမာသုံးစွဲဖို့ ဒီ template ကို Download လုပ်ပါ.
လှမ်း 2. template ကိုတင်ပါ။ အတည်ပြုမရနိုငျသောဒေတာများရှိခဲ့ပါလျှင်ဒေတာနှင့်အတူ template ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်အဆိုပါစနစ်အားသတိပေးတော်မူမည် ဤအသက်တမ်းရှိအကြားကပါဝင်သည်:
ကိုသြဒီနိတ် Non-numeric လယ်ကွင်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်
အဆိုပါဒေသများအတွက် 1 နှင့် 60 ကြားတွင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်
လယ်ပြင် hemisphere မြောက်သို့မဟုတ် South ထက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလည်းမရှိပါ။
ဖော်ပြချက်ဒေတာသည်ပုံ၏ဖော်ပြချက်ပါ ၀ င်သောဥပမာတွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း html ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလမ်းကြောင်းများသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ၏ disk၊ ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ကြွယ်ဝသောအကြောင်းအရာများကဲ့သို့သောလင့်ခ်များကဲ့သို့သောအရာများကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
အဆင့် ၃။ ဇယားနဲ့မြေပုံပေါ်ကဒေတာတွေကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ထိုခဏခြင်းတွင်ဒေတာ upload တင်, စားပွဲအက္ခရာနံပါတ်ပါတဲ့ဒေတာကိုပြသခြင်းနှင့်ပထဝီတည်နေရာ map; သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ် Google Maps ကိုလိုအပ်သည်အတိုင်း, အပ်လုဒ်ကိုဖြစ်စဉ်ကိုဤအပထဝီကိုသြဒီနိတ် format ရဲ့အသွင်ပြောင်းပါဝင်သည်။
အိုင်ကွန်ကိုလွှတ်ပြီးသည်နှင့် Google Street View ပေါ်ရှိအမှတ်များကိုကြည့်ရှု။ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အိုင်ကွန်များကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
အဆင့် ၄။ ဒေတာတွေကိုပြန်ပယ်ချပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် Google အသုံးပြုသည့်အတိုင်း data load သည် WGS84 တွင်ရှိသည်။ သို့သော်ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်သင့်အားအခြား projected coordinate system တစ်ခုသို့ပြောင်းရန်နှင့် map ကို refresh လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါ Clarke 1866 သို့ပြောင်းပြီးဒေါင်လိုက်မြေပုံပေါ်တွင်ပြန်လည်စီမံထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
အဆင့် ၅။ gTools service ကိုသုံးပြီး Kml မြေပုံကိုကူးယူပါ။
သင် download ကုဒ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရင် Google Earth တွင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သောဖိုင်ရှိသည်။ အကြိမ် ၄၀၀ အထိ download လုပ်နိုင်သည့် download ကုဒ်တစ်ခုကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရယူမည်ကိုဖော်ပြသည်။ gTools API ကို အသုံးပြု၍ ဒေါင်းလုပ်တစ်ခုချင်းစီတွင်မည်မျှဒေါင်လိုက်ရှိနိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ မြေပုံမှာ Gooogle Earth မှကိုသြဒီနိတ်များကိုသာပြသပြီးသုံးဖက်မြင်မော်ဒယ်အမြင်များကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်။
နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခု - Excel macro သုံးပြီးကိုသြဒီနိတ်တွေကို kml ဖိုင်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းပါ
ဇယားကွက်အချက်အလက်ဖြည့်ပြီးသည်နှင့် kml ဖိုင်အမည်နှင့်သိမ်းဆည်းမည့်လိပ်စာသည်ညာဘက်တွင်ပေါ်လာမည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ် ကို C: \_ Carrera 25 X.kml
အောက်ခြေတန်း၌ဤအမှု၌, ထိုအင်္ကျီကိုပု KML file ကိုလိမ့်မည်နာမကိုရေးရန်: Rising Carrera 25 X ကို
ရလဒ်မှာအချက်တစ်ချက်ကိုထိခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံး Excel ကော်လံ၏ဖော်ပြချက်ကိုပြသနိုင်သည်။
ရလဒ်မှာ၎င်းကို Google Earth တွင်ဖွင့်သောအခါအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ အလွှာ၏အမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သကဲ့သို့ကြည့်ပါ၊ ထို့နောက်ဖော်ပြချက်ပါအချက်များရှိသည်။ သူတို့ကိုထိအသေးစိတ်တဲ့ display ကိုပေါ်ပေါက်။ အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်လျှင် တံဆိပ်များ သူတို့ကသင်အလွှာ Right-ကိုနှိပ်ခြင်းအား Properties ကိုရွေးချယ် Google Earth ကိုစိတ်ကြိုက်နိုငျသညျ, အလွန်ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ငါရေးလိုက်ဖော်ပြချက်ထဲတွင်သက်ဆိုင်တဲ့ဆဲလ်ဖြစ်လျှင်, ဘဏ်များ၏အသေးစိတ်အဆင့် image ကိုပန်းကန် cadastre မထားချင်ဆိုပါစို့:
ပိုင်ဆိုင်မှုကန့်သတ်, Cadastre-level ဘဏ်
ကျွန်မဓာတ်ပုံခေါ်ပြီအမှတ်, ငါအိမ်၏မျက်နှာစာ၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုနေရာချချင်တယ်ဆိုရင်အလားတူသည်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆင်တူသည်။
ဒါဟာသင် Excel ကိုဖိုင်ကိုဖွင့်တဲ့အခါသင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသော၏ကွပ်မျက်ကိုလက်ခံလိုအပ်သည်
အကယ်၍ သင်ကအမှားအယွင်းပေးသောစာတစ်စောင်ပို့လိုက်လျှင်၊ C: လမ်းညွှန်၌ရေးခွင့်ခွင့်မရှိပါ၊ C: \_ users \_ downloads \_ t
ဒီကနေသင်တို့ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် KML file ကို ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်။
Excel တွင် template ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်သင်လုပ်နိုင်သောသင်္ကေတအလှူငွေလိုအပ်သည် paypal သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်.
သင်သည်အဘယ်သို့ရှိအရှည်, အမျိုးအစား, ပထဝီလတ္တီကိုသြဒိနိတ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့် Google Earth ကိုပို့ချင်တယ်ဆိုရင်, အဆိုပါ template ကိုဤသူကား.
ဒါဟာ application ကို အသုံးပြု. အောက်ပါဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုလက်ခံရရှိအံ့သောငှါဖြစ်ပျက်ဖြစ်နိုင်သည်:
75 အမှား - ဖိုင်မှတ်တမ်း Path ကို။
အဆိုပါ KML file ကို save လုပ်ဖို့လက်လှမ်းသို့မဟုတ်ဤ action ကိုမခွင့်ပြုချက်မပေးရာလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ကြောင့်ဤအဖြစ်ပျက်။
အကောင်းဆုံးကတော့၊ disk C ထက်ကန့်သတ်ချက်ရှိသော disk D ကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုထားသင့်သည်။ ဥပမာ -
: D: \_
ငါတို့ပြတင်းပေါက်, အလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက် template ကိုအတွက်ညွှန်ပြသကဲ့သို့, ဒေသဆိုင်ရာ panel ကိုအတွက်ဒေသသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်:
ထောင်ပေါင်းများစွာသော separator များအတွက် -Eat
separator စာရင်းများမှ -Coma
ဒါကြောင့်တကျိပ်နှစ်ပါးစင်တီမီတာနှင့်အတူဒေတာတစ်ထောင်အဖြစ်ခုနစ်ရာရှစ်ဆယ်မီတာ 1,780.12 အဖြစ်ရှုမြင်သင့်ကြောင်း
အဆိုပါပုံရိပ်ကဒီ configuration ကိုပြုမိသည်ကိုဘယ်လိုပြသထားတယ်။
ဒါဟာ control panel ထဲကမှ configuration ဖေါ်ပြခြင်းအခြားပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ပြီးတာနဲ့သူကသင့်လျော်တဲ့အစက် Google Earth တွင်ပေါ်လာဘယ်မှာအဲဒီနောက်အဲဒီဖိုင်ကိုနှင့် rebuilds ။
သင့်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါက support editor email@geofumadas.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။ သင်အသုံးပြုနေသောပြတင်းပေါက်များ၏မူကွဲကိုအမြဲဖော်ပြသည်။
ယခင် Post မှ« Previous AutoCAD ကြည့်လေ့လာပါ
Next Post $3အဘို့သင့်တံခါးနားမှာ AutoCAD သင်တန်း 34.99D,နောက်တစ်ခု»
၁၁၄“ UTM ကိုသြဒီနိတ်မှဂူဂဲလ်ကမ္ဘာသို့ Excel” သို့တုံ့ပြန်မှု
အကယ်၍ သင်ပုံစံကိုဝယ်ယူပြီးပါကသင်၏မေးလ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် support mail သို့စာရေးပါ။
များသောအားဖြင့်၎င်းသည် mail: editor @ geofumadas ဖြစ်သည်။ com
ကြက်သွန်ဖြူ သူ says:
လက္ခဏာသက်သေကိုရယူပါဒီမှာ virker ikke ။ Hvor kan jeg får tak i den?
Get token ဤနေရာတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဘယ်ကရနိုင်မလဲ?
Pedro သူ says:
အဆိုပါ 2019 နိုင်ပါစေ
မင်္ဂလာပါ၊ UTM ၏သြဒီနိတ်များမှ "Excel to Google Earth" ကိုသရုပ်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ယာယီစမ်းသပ်ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုပညာရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာကျွန်ုပ်လျှောက်လွှာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတွင်မျှဝေနိူင်ပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မတ်လ 2019 ပု
သင်၏ Windows ဒေသသွားပြီးထောင်ပေါင်းများစွာ separator အဖြစ်ဒဿမ separator နှင့်ကော်မာအဖြစ်မှတ်သတ်မှတ်။
သင်ဆဲမေးခွန်းများရှိပါကသင် template ကို၏ဝယ်ယူနှင့်အတူကြွလာထောက်ခံမှုအီးမေးလ်ရေးပါ။
Wueber Bogado သူ says:
ဒါဟာအစမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှငါ့ကိုဦးဆောင်နှင့်အမှတ်မိုဃ်းတိမ်ကို Asuncion, ပါရာဂွေး၌တည်ရှိ၏
ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 ပု
365 နှင့် 64-bit မှာရုံးသစ်ကိုဗားရှင်းတွေနဲ့လိုက်ဖက်မှု၏ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
Saudações Ulisses ။
အိုပြဿနာနှင့်ဒေသတွင်းconfiguração Seu လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်လုပ်ပါ။
seja vírgula separator milhar အွမ်, အွမ်ဒဿမ separator အဖြစ် separator EO ponto စာရင်းအဖြစ်vírgulaမှအွမ် ponto အဖြစ်ထားရှိကြောင်းVocê deve အာမခံချက်။
obter မှ escreva သို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန် acompanha ကြောင့် e-mail, suporte များအတွက်ဝယ်ယူမော်ဒယ် suporte လုပ်ပါ။
Ulisses RIBA ဂျူနီယာ သူ says:
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ၊ သတင်းအချက်အလက်ဖြည့်ပြီးပြန်လာသို့မဟုတ်အမှားထည့်ပါ။ » Microsoft Visual Basic »ကွပ်မျက်ချိန်အတွင်းအမှား« 13 »: Incompatíveisကိုရိုက်ပါ။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော separator အဖြစ်မှတ်,
စာရင်း separator အဖြစ်ကော်မာ။
ALEJANDRO သူ says:
ဒါဟာကောင်းသောအရာမတွက်ချက်မှုများမမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းရန်သင့်အားပေးပို့ငါတောင်မှဒေတာ Excel ထဲမှာအဖြစ်လာမယ့်အတူကပြုမိပါပြီနှငျ့သငျမြောက်ကိုရီးယားဝင်ရိုးစွန်းပို့ပေးကြောင့်အထက်အရာတစ်ခုခုနှင့်အဘို့အ cobreis တဲ့ဟာသအလုပ်မလုပ်ပါဘူးပုံရသည်, မျှော်လင့်ချက် ထိုပြဿနာကို solucioneis ။
ငါပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပြီး“ Run-time error´75 get:
အဆိုပါ 76 အမှားများသောအားဖြင့် aa သင်ဖိုင်ကိုဖန်တီး directing ရှိရာ folder ကိုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
အစားကို C ထက်: တစ် D ကိုအပေါ်တစ်ဦးလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်စံပြကြောင့်မကြာခဏက C ထဲမှာရေးသားခြင်းကိုညွှန်ကြားဖို့ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်ပါဘူး:
ဒါ့အပြင်သူကထောင်ပေါင်းများစွာ separator အဖြစ်ဒဿမနှင့်ကော်မာအဖြစ်ခွဲခြာအမှတ်ဒေသတွင်းသုံးသပ်ချက်များရန်သဘောတူ။
ကားလို့စ် Estopier သူ says:
မင်္ဂလာပါကျနော် Mac အတွက် Excel ကိုသုံးပြီးတော့ငါ့ကိုအရေအတွက်ကို 76 ပျက်ကွက်
Antonio Felipe Abem ကြီး Athar မိဘများ သူ says:
Quero Excel ကိုကုန်းပြင်မြင့် Google နဲ့ဟတ်vocês tem coordenador X ကို YZ ပြုပါ
သငျသညျရှိသည် settings ကိုမှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအဆင့်တွင်သင်သည် Excel ကိုသို့မဟုတ် Windows ဒေသရှိသည်?
အဆိုပါရပ်တည်ချက်ဖြေလျှော့ဖို့, သင် egeomates (မှာ) မေးလ်အယ်ဒီတာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ com
Francesca Mengozzi သူ says:
ငါ့ကို link ကိုပေးပို့ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခုတော့သင်ပြုသမျှ, မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှငါ့ကိုလွှတ်။
ငါနောက်ပြန်ထို့နောက်နောက်ပိုင်းတွင်ပထမဦးဆုံးနှင့် UTM N ကိုအီး ထား. , ။ ငါကော်မာများနှင့်ဒဿမအချက်များနှင့်အတူထောင်ပေါင်းများစွာခွဲခြား။
အဆိုပါသြဒီနိတ်မြောက်ပိုင်းချီလီ (19 s) ကို၌ရှိကြ၏။
သင်မေးလ်လှေတျတျောမူခဲ့ကြသည်, ထိုပြဿနာကြောင့် mistyped မေးလ်ဖြစ်ပါသည်,
ငါနှစ်ကြိမ် paid နှင့်ထုတ်ကုန် template ကိုလက်ခံရရှိဘူး။
ကာရိုလိုင်းနားဟိုင်း, ကြှနျုပျတို့သင့်အီးမေးလ် link ကိုစလှေတျပါဘူး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စပမ်းဖို့ကနျြရစျနိုငျတယျ။
ကာရိုလိုင်းနား Trujillo သူ says:
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုပေးချေပြီးပြီဆိုပေမယ့်မင်းငါ့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့မရဘူး PayPal မှကာရိုလိုင်းနား Trujillo ၏နာမကိုပေးချေပြီးလက်ခံဖြတ်ပိုင်းသည် ၇၉၇၈၄၉၂၉ × ၉၀၅၂၆၄၂ ဖြစ်သည်
ဂူစတာဗို သူ says:
မတ်လ 2017 ပု
ငါပြီးသားအနည်းငယ်ကြောင့်၌အကြှနျုပျတို့၏အမှုကိုရှင်းပြခြင်း, မေးလ် template ကိုစလှေတျတျောပါတယ်။
အဆိုပါ template ကိုအကြောင်းကို 500 မှတ်ဘို့ရာခန့်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပြီးအချက်များကြောင့်တိုးချဲ့ဖို့, သင်ကုဒ်ပြုပြင်မွမ်းမံရမည်ဖြစ်သည်။ egeomates @ အဆိုပါ template ကိုအယ်ဒီတာ Send နဲ့ကျွန်မတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ပုံစံကိုချဲ့ထွင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်သင်က Google Earth နှင့်အတူ .kml file ကိုဖွင့်လှစ်သောအခါရုံသင်ထောက်ကူအချက်အလက်များ၏မူရင်းတန်းစီဖို့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာနေကြသည်။ ဘယ်လိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မှတ်၏အသံအတိုးအကျယ်ရိုက်ထည့်ပါကတိုးချဲ့နိုင်မည်နည်း, ထည့်ရန်အချက်များတစ်ဦးကန့်သတ်မှုရှိသနည်း
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဂျွန်ပေါလ်။ ကျနော်တို့ download ပြုလုပ်, သင့်အီးမေးလ် link ကိုပေးပို့ခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်သူသည်သင်၏ spam များကိုသွားပြီခဲ့သည်။
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဖိုင်နဲ့တွဲပြီးငါက "သင်္ကေတဆိုင်ရာအလှူငွေ" ကိုနှစ်ကြိမ်ပေးပြီးပုံစံကိုတော့မရခဲ့ဘူး။
မှားယွင်းနေသည် 75 သင်ယူနေတဲ့လမ်းကြောင်း disk ကို C ပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲတိုက်ရိုက်ထက်ရေး access ကိုမဖြစ်စေမယ့် subfolder သို့မဟုတ် disk ကိုအီးအခြားဦးတည်ချက်ကြိုးစားကြ idica
ဂျင်း Braga သူ says:
Ponto နှင့် Virgula မျှမက de Control ပြတင်းပေါက်ပြုပါ painel opçãoမှ Meu စျေးကြီး, alterei, EO ပြဿနာဆက်ရှိနေသေး။
လမ်း / မော်ကွန်းတိုက်များသို့သွားခြင်းမှအမှားအယွင်းရှိသည်။ »
Coloquei သို့မဟုတ် arquivo KML em: က c: \_ Carrera 25 X.kml
Detalhe: အလုပ်ရှာဖွေရေးစစ်တမ်း 25 X ကို
ငါ့ကိုဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင် ajudar ပေးပါ။
um erro Ao သြဒီနိတ်အဖြစ် processar ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အို ponto (။ ) EA virgula (,) estão abaixo အရသိရသည်။
N ကို: 8.620.815,130
Tentei စရဖ Nao deu certo, excel ပါဘူး mask မှရွေ့လျားပြောင်းလဲပစ်။
ဖိုင်: /// C: /Users/geofumadas/Pictures/005c_got.png
လမ်းကြောင်းရှာရန် google chrome ကိုဖွင့်ပါ။ ဤနေရာမှ“ ctrl + o” ကိုအသုံးပြုပြီးဖိုင်ကိုရှာဖွေသည်။ url တွင်သင်လမ်းကြောင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခုကြှနျုပျတို့သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းတစ်ခုကိုအာဏာရဒေသအလိုက်အချက်များအတွက်ပုံရိပ်တွေထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်, အကူအညီနဲ့ဘို့ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုလမ်းကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးသင့်သလဲ
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသောဒေသဆိုင်ရာ setting များကို Check, ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ခွဲခြာအဆိုပါကော်မာများနှင့်ဒဿမ setting များကိုအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဆဲပြဿနာများကိုဖန်တီးပေးလြှငျ, သင်ထည့်သွင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်၏ဖိုင်ပို့ခြင်း, အယ်ဒီတာထံစာရေး။
(Arroba egeomates အယ်ဒီတာ။ Com)
အဆိုပါ KML file ကိုထုတ်လုပ်သောအခါငါထုတ်ပေးသည် Excel ကို template ကို၏ဝယ်ယူလုပ်ပေမယ့် Google Earth တွင်တူညီသောသြဒီနိတ်သင့် site ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါဘူး, တူညီတဲ့အချက် (မြောက်ပိုင်းဝင်ရိုးစွန်း) ကို ပို. ပို. ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်နေသည်။
ကျနော်တို့စပိန်၏မြောက်ဘက်တွင်ရှိနှင့်ငါတို့စိတ်ကူးအဆိုပါခေါ်ဆောင်သွားအချက်များနှင့်၎င်းတို့၏ဓာတ်ပုံများနေရာချထားဖို့ template ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ 2016 ပု
ထရီ သူ says:
ချစ်ခင်ရပါသော, ငါသည် Paypal ဖြင့်ဝယ်ယူရာ၌ခန့်ထားပြီ, ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲ download link ကိုအတူမေးလ်ရ။ ယင်းစောင့်ဆိုင်းအချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ
ကျနော်တို့ mail ဖြင့် link ကိုစလှေတျတျောပါတယ်။ သို့သော်သင်အမြဲတစ်ခါတစ်ရံအဲဒီမှာသွား, အ spam များကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
ခရစ်စတီးနား သူ says:
အဆိုပါ 2016 နိုင်ပါစေ
ငါပြီးသား Paypal မှတဆင့်ငွေပေးချေရာ၌ခန့်ထားပြီ, ဒါပေမယ့်ငါ template ကို download လုပ်ပါဆိုမေးလ် link ကိုလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ်။ ငါ spam များကို check လုပ်ထားနှင့်ပြသဘူး။ ဘယ်လောက်ကြာကမေးလ်ရရှိရန်ယူ။
ဧပြီလ 2016 ပု
ကျနော်တို့ပြီးသားသင်သည်နှစ်ကြိမ်ဝယ်သည့် template ကို၏ငွေကြေးပြန်လည်စေပြီ။ သင်ပိုမိုပြဿနာများရှိပါကသင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။
ကျနော်တို့ mail ဖြင့်ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။ တခါတရံသူက spam များကိုသွားပေမယ့်သင်က link ကိုပေးပို့ခဲ့ကြသည်။ သငျသညျပြဿနာများရှိပါကသင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။
CIRILO GIRALDO SALAZAR သူ says:
ထိုသူတို့ဖြစ်ကြသည် PayPal ကမှတဆင့်ရာ၌အရောင်းအများ၏ identification ဖြည့်စွက်ရန်:
တစ်ဦး prompt ကိုတုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်ပါ။
ယခုအချိန်တွင် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Geofumadas.com လူကြီးလူကောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် PayPal မှတဆင့် "UTM COORDINATES မှမြေကြီးအတွက်ကောင်းသောအရာများ" ဟူသောကုန်ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်ပေးပြီးပါပြီ။ ပရိုဂရမ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် PayPal သို့ကျွန်ုပ်ကိုပြန်ပို့ပြီးအမှားအယွင်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ 4.99 USD အားပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။
ငါသည်ဤမင်္ဂလာရှိသောကုန်ပစ္စည်းရဖို့နီးပါး $ 10.00 အမေရိကန်ဒေါ်လာပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်သည်ဟုမထင်ကြဘူး။
program ကိုသို့မဟုတ်ဘယ်လိုငါသူတို့သည်ငါ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီးမေးလ်ငါ့ကိုလွှတ်လျှင်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဘာလုပ်ရမှန်းငါ့ကိုပြောပြပါ; အပိုငွေပေးချေမှုရပြုသူ၏နာမကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဒီဇင်ဘာလ 2015 ပု
အဆိုပါ spam များကိုစစ်ဆေးပါ။ တခါတရံသူကအဲဒီမှာတတ်၏။ သငျသညျပြဿနာများရှိပါကဥပဒေကြမ်းပေါ်တွင်သင်အီးမေးလ်ရေးပါ။
တနင်္ဂနွေ သူ says:
အဆိုပါ template ကိုဝယ်ပါနဲ့ငါ post မှမရကြဘူး, ငါတူ, ကျေးဇူးတင်စကားပေးပို့ဖို့လုပျအဖွစျ။
သင့်အီးမေးလ်ကို spam စစ်ဆေးပါ။
Carlos choir သူ says:
အောက်တိုဘာလ 2015 ပု
ဖြစ်နိုင်ရင်အဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ယင်းကို C drive ကိုကား disc ကို: D အပေါ်ထက်အခြားကို C အတွက်ရရှိနိုင်တိုက်ရိုက်အရေးအသားမဟုတ်ပါဘူး
ငါကို PC ရဲ့ hard disk ကိုအတူပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်, ပြောင်းခဲ့ရတယ်။ ငါ Google Earth မှ UTM သွားပုံစံကိုအသုံးပြုရန်လိုချင်ငါ့ကိုအောက်ပါမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးသည်
76 runtime ကအမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်
စက်တင်ဘာလ 2015 ပု
ဒါဟာသင့်ရဲ့အီးမေးလ်ထဲမှာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်က spam များကိုသွားကြောင်း Check
Juan Carlos Vegas သူ says:
သင် template ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရှိရာအရပ်ပေးဆောင် ????
ဇွန်လ 2015 ပု
ဤသည် template ကို UTM data တွေကိုထည့်သွင်းဖို့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဒဿမဒီဂရီသို့မဟုတ်ဒီဂရီ / မိနစ် / စက္ကန့်ဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို add နိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့, သင်ဓါတ်ပုံတွေကို add နိုင်ပါတယ်။
အိုင်ကွန်အမျိုးအစားကိုပြုပြင်ပါ။ ၎င်းသည်လက်ရှိ template ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွင်မရှိပါ။
သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အခြေအနေများအောက်တွင်တင်းပလိတ်တစ်ခုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်သည်။
joseluis သူ says:
ဆဟဲလို! အချိန်လေးလွန်ခဲ့သငျသညျအကြှနျုပျကိုငါသည်ဤ Excel ကို template ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်နှင့်မေတ္တာရပ်ခံပမာဏကိုပေးချေရန်ဆန္ဒရှိဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ငါအချို့သံသယရှင်းလင်းချင် Google Earth ကိုငါ့ဖိုင်တွေ upload ကူညီပေးခဲ့သည်:
1-နိုင်ပါတယ်ဒီဂရီ, မိနစ်, စက္ကန့်သို့မဟုတ်ဒဿမဒီဂရီကိုအသုံးပြုတဲ့သူမှပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းရှိလော့။
ဇန်နဝါရီလ 2015 ပု
စာမကျြနှာ / ဝယ်ယူဒေါင်းလုတ်လုပ်မယ့် link ကိုဖွင့်ပြသသင့်ပါတယ် refresh
ဂျူလီယန် Morales သူ says:
ငါသည်ဤ template ကိုရောင်းချသို့မဟုတ်ဘယ်မှာငါရနိုင်ရလိမ့်မယ်
ramona သူ says:
စက်တင်ဘာလ 2014 ပု
ကဆောင်းပါး၌တည်ရှိ၏ link ကိုသုံးပါ
အဆိုပါ application ကိုအလွန်ကောင်းသောကြည့်ရှုသည်။ ငါကဘယ်လိုလုပ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်သလဲ?
silvia သူ says:
ငါကသက်သေပြရန်အတွက်စာရင်းဇယားကို download လုပ်အမျှ?
ဟူဂို Monte က de Oca သူ says:
ရုံး၏လုပျငနျးလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အလွန်ကောင်းသော tool ကို, မေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏
Sergio သူ says:
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ application ကိုပုံရသည်, ငါတို့ကြိုးစားကြရမယ်
Rafael သူ says:
ဟဲလိုအကြှနျုပျ၏ပြဿနာငါအရင်ထွက်ကြွတော်မူသောအခါငါ KML "runtime ကအမှား 75" ဖန်တီးပြီးတော့ကျနော်သူတို့ငါလုပျနိုငျ "runtime ကအမှား 76" get ဆိုပါတယ်အမှုကိုပြုဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောညဥ့်
Mikel Belasko သူ says:
အထူးသငါအတူတူပင်ကိုသြဒိနိတ်ပြောင်းလဲခြင်းဂဏန်းတွက်စက်ကိုသုံးပြီး° 32400.000000 နှင့်လောင်ဂျီတွဒ် -1.000000 လက်တီတွဒ်ဘာသာ, သို့သော်, ငါအမှတ် Google Earth တည်းဖြတ်ကတည်းကကိုယ့်ဂဏန်းတွက်စက်၏သြဒီနိတ်ရိုက်ထည့်ပါ, မူရင်းမိုင်းကြောင်းကောင်းစွာတွေ့မြင် ကောင်းစွာငါ့ကိုတတ်၏။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သငျသညျ (ကျနော်ဒဿမအမှတ်နှင့်အတူသွားကြဖို့အရာအားလုံးသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ကော်မာနှင့်အတူထောင်ပေါင်းများစွာင့်) လုပ်ပေးသမျှကိုအမြဲအီကွေဒေါမှငါ့ကိုမကြာပါသည်။ အရှည်ငါကောင်းကောင်းလုပ်ထင်ပေမယ့်လတ္တီကျူ0ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသငါသည်ဤဒေတာ UTM ED50 မဟုတ်တဲ့ wgs84 မြောက်ပိုင်းစပိန် (Navarra) မှပိုင်ဆိုင်နှင့်စနစ်တကျဂီနီပင်လယ်ကွေ့တွင်ကျင်းပထားတော်မူ၏။
Pagomotzeta 567,825.00 475,170.00 30 N ကို
ကြှနျတေျာ့လစာ PAL အကောင့်အခြားအီးမေးလ်အကောင့်နဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့ငါသည်သင်တို့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျတျောအရာကနေဒီအီးမေးလ်လိပ်စာဖို့ enviases တန်ဖိုးထားချင်ပါတယ်။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
UTM ဒီပြဿနာလျှင်ကြည့်ရှုရန်ဤအကြမ်းဖျဉ်း, အချက်များကိုသို့မဟုတ်ကော်မာအဘယ်သူမျှမထည့်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုသြဒိနိတ်။
ထိုအခါသင်သည်သင်၏စက်၏ဒေသဆိုင်ရာ settings ကိုသွားပါနှင့်အပြောင်းအလဲလုပ်ရမည်။ ဒါဟာထောင်ပေါင်းများစွာ separator နှင့်စာရင်း separator အဖြစ်ကော်မာကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်; အဆိုပါဒဿမအဖြစ်မှတ်။
Jorge သူ says:
ကျွန်ုပ်ဖိုင်ကိုဖန်တီးခဲ့သော်လည်းမြေကြီးပေါ်တွင်ကြည့်ရှုသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား N pole သို့ပို့သည်။ သင်ပြောသည်မှာငါအသုံးပြုသော UTM ကိုသြဒီနိတ်များသည်လတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ်မှကိုသြဒီနိတ်များမှအသွင်ပြောင်းခဲ့သော်လည်း WGS50 အစား ED84 datum ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကို Excel တွင်အသုံးပြုသော UTM ပုံစံဖြင့်အရင်သွားရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာသူတို့မကိုက်ညီရင်တောင်ကွာဟမှုကသိပ်မများဘူးလို့ငါထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ ED50 နဲ့သူတို့သုံးတဲ့ကိုသြဒီနိတ် (WGS84 (သူတို့ကစပိန်နိုင်ငံမှ)) မှာသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်၊ offset ကမီတာအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ ငါဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်၊ "တံဆိပ်များ" ကော်လံထဲကတံဆိပ်တွေတောင်မှ။ ငါအမှားဘယ်မှာမဆိုစိတ်ကူး? ခြေလှမ်းများနှင့်ဒdecimalမ format ကို (ဇုန်အဘယ်သူမျှမ 29 ဖြစ်ပါတယ်?) မှန်ကန်သောပေါ်လာပါသည်။
Gloria DOMINGUEZ သူ says:
ဒီဇင်ဘာလ 2012 ပု
ငါ UTM မှgeográicasကနေပြောင်းလဲဘို့ရေးထားပေမယ့် Google ကသူ့ဟာသူပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖိုင်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ဖိုင်ကိုနှင့်အတူပြဿနာကိုအဘယ်သူမျှမရှိသည် file ကိုထုတ်ပေးပေမယ့်သြဒီနိတ် 180grados 0minutos 0.00Segundos မြောက်အမေရိကနှင့်လတ္တီတွဒ် 74 ဒီဂရီ0မိနစ်နှင့် 0.00 စက္ကန့်နှင့်အတူကျန်ခဲ့အားလုံးအချက်များ အနောက်ဘက်မှာလည်းမြေပုံပေါ်တွင်အမှတ်မပြထားဘူး။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတန်ဖိုးထားတယ်။ ဂလိုရီယာ Dominguez ။
အဆိုပါ spam များကိုမေးလ် Check, တစ်ခါတစ်ရံ download link ကို template ကိုသွား
ငါ UTM လာခဲ့ပါဘူးဟာပထဝီကိုသြဒီနိတ်ဖြတ်သန်း, Google Earth ကနေဖိုင်တွေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချရန် template ကိုမရခဲ့ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုအတည်ပြုပေးပါ။ သငျသညျကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ GEDL
ကျနော်တို့ Mac ကို IOS ကိုအပေါ်ကိုစမ်းသပ်မသမ္မာတရားကို။
အဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပြproblemနာကဆက်သွားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါထို့နောက်တင်ပို့ရန်အတွက် kml ဖိုင်သို့ပြောင်းလိုက်သောအမည်ကိုပြောင်းလိုက်သည်။ မိတ်ဆွေတစ် ဦး ၏ထောက်ခံမှုမှငါသည်« \_ SIMV \_ MAPAS.000.000.000.kml »မှ« \_ SIMV \_ MAPS \_ test.kml »သို့ပြောင်းခဲ့သည်။ ယခု၎င်းကိုပို့ကုန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖိုင်တွဲသို့ပို့မပေးသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ဖိုင်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် Excel ရှိသည့်ဖိုင်တွဲတစ်ခုတည်းတွင်ဖြစ်သည်။
သငျသညျငါကတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်သည့်အကြံပြုချက်များရှိပါက, ငါက Windows ပေါ်မှာဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးကအမှားခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ယခုငါနဲ့ Mac ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲဒီမှာကြှနျုပျတို့သညျသှား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဖန်။
က c: mapas.kml
သင်စားရှာဖွေသူ mac ကနေအဲဒီမှာဖိုင်တစ်ခုဖန်တီးရန်ကြိုးစားသော directory ကိုရေးခွင့်ရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ငါ generate သောအခါအကြှနျုပျကိုပြောတယ်, တစ်ဦးနဲ့ Mac သုံးစွဲဖို့ကြိုးစားနေတာပါ "အမှား '' 52 '' runtime, အမည်သို့မဟုတ်အရေအတွက်ကမှားယွင်းတဲ့ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ "
ဒါဟာငါ့ကိုလေး options များ, ပထမဦးဆုံးချွတ်ပေးသည်, ငါသာတကယ်ကနောက်ဆုံးသုံးမဆိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်:
1 ။2Continue ။ Finish ကို3.Depuración 4.Ayuda
'မက်ခရို Geofumadas အတွက်တည်းဖြတ်သည်
သငျသညျ KML ပုံစံကပြောင်းရမယ်
ဤသည် gvSIG GIS သို့မဟုတ်အခြား program နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်
အန်တိုနီယို Becerril သူ says:
ငါပွုအဖြစ်ငါပုံဆွဲ UTM သြဒီနိတ်တစ်လမ်း၏ linchpin ဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦး DWG ပုံဆွဲ Google Earth upload ရန်လိုအပ်ပါတယ်
ကို C: / မြေပုံများ /
အများဆုံးလက်တွေ့ကျသည်မှာအင်တာနက်ဘရောင်ဇာမှ၊ လမ်းကြောင်းကြည့်ဖို့လိပ်စာကိုရှာပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အကယ်၍ သင့်တွင်“ my documents” ကဲ့သို့သောနေရာလွတ်ရှိသည့်လမ်းကြောင်း၏အမည်ရှိပါက၎င်း၏ URL တွင်ပေါ်လာသည့်အတိုင်းသင်ရေးရမည်ဖြစ်သည်။
Jorge Echeverria သူ says:
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးပါ။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် kml ဖိုင်ဖန်တီးရန်အတွက် "route" ၏ဥပမာများကိုပေးပါရန် "75 runtime error" ကိုကျွန်ုပ်ရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းများ (သို့) desktop ပေါ်မှဥပမာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မော သူ says:
တိုက်ရိုက် download, strain အဘို့ link တစ်ခုနှင့်တကွသင်တို့ဆီသို့ကြွလာသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုတခါတရံရှိ, အ SPAM စစ်ဆေးပါ။
ငါ paypal အားဖြင့်ငွေပေးချေရာ၌ခန့်ထားပြီဒါပေမယ့်သူတို့ကအိုင်ဒီလိုအပ်တယ်ဆိုရင်, ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်မဆွဲခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါသင်္ဘောငွေပေးငွေယူ၏။
အဆိုပါ 2012 နိုင်ပါစေ
ငါတို့သည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း, PayPal ကသို့မဟုတ် PayPal ကသူနဲ့ဆက်စပ်ဒက်ဘစ် / အကြွေးကို အသုံးပြု. ဖြစ်ပါတယ်။
Jose Rivera CABALLERO သူ says:
ငါအရေးတကြီး Google က Eaarth မှ Excel ကိုလျှောက်လွှာများဝယ်ယူမလိုအပ်ပေမယ့်ငါသာဒက်ဘစ်ကဒ်ရှိသည်။
ဟိုဆေး Rivera - လီမာ, ပီရူး။
တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်လမ်းကြောင်းညံ့ဖျင်းစွာဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ လမ်းကြောင်းတစ်ခု၏ပုံသဏ္fileာန်တစ်ခုအားကြည့်ရှုရန်အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ browser မှ image file ကိုဖွင့်ရန်၊ ပုံပေါ်တွင်ညာခလုပ် နှိပ်၍ ဖွင့်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် browser ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကအထက်လမ်းကြောင်းကိုကြည့်
Ericson သူ says:
ပုံဒြပ်စင်ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် point ရဲ့သီးခြားနှင့်မတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း indicas သကဲ့သို့ငါစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုဝင်သောအခါငါဒေသခံတစ်ဦးလမ်းကြောင်းကနေဓာတ်ပုံတပုံကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မပေး။ ငါ image ကိုဖော်ပြရန်ရန်ကြိုးစားသောအခါသာပုံဘောင်မှထွက်ကြွလာပေမယ့်မပေး။
ငါချိတ်ဆက်ပေါ့လျှင် tab ကိုကြည့်ပါ။
သူတို့မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင် ecribirme နိုင်ပါတယ် editor@geofumadas.com
ana သူ says:
အယ်ဒီတာမင်္ဂလာပါ, သင်တို့ကိုငါအကြှနျုပျကိုရောင်းချခဲ့, သင်ချက်တင်အတွက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ့် template ကိုသင်စကားပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်?
ကောင်းပြီ, အလေ့အကျင့်အတွက်စံပြ KML တစ် GIS အစီအစဉ်နှင့်ပို့ကုန်ဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
စာရင်းစစ်မှကိုယ်ပိုင်အကူအညီကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင့်ကုန်ကျမှုမည်မျှပင်ရှိပါစေအရေးတကြီးအကူအညီလိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ခွင့်လွှတ်ခြင်း Excel ကို format နဲ့ငါ Excel ၌ရှိကြ၏ဘူးသောဦးထက်ပို 600 အချက်များ၌ရှိကြ၏။
ဆိုက်ကို: သံမဏိ actopan
လတ္တီတွဒ်: 20.654443 အရှည်: -103.377499
ဤသည်ကိုငါဂူးဂဲလ်ကမ္ဘာမြေ၏စိတ် ၀ င်စားသောဗားရှင်းသို့ပြောင်းချင်သည်။ အချက် ၆၀၀ ကျော်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များငါ kml ပုံစံဖြင့်သွန်ရန်လိုအပ်သည်။ မင်းရှင်းပြမယ်မပြောဘူး ...
ကျွန်တော်တို့ကိုဒေတာတစ်ဦးပွိုင့်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဘယ်အရာကို format နဲ့သူတို့မည်သို့ဥပမာတစ်ခုပေးပါ။
မင်္ဂလာပါ။ စိတ်မကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာမြေတွင်ကြည့်ရှုရန်၎င်းတို့၏အချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များဖိုင်တွဲတစ်ခုအား kml ပုံစံသို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြနိုင်သည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါအမှတ်ဒဿမ separator သည်ကော်မာ separator နှင့်ကော်မာထောင်ပေါင်းများစွာ separator လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်ရပါမည်သည့်ဒေသအတွက်နောက်တဖန် check လုပ်ထားနှင့်ဆက်ဆက်ညာဘက်။
အဆိုပါ input ကိုများအတွက်အဆင်သင့်, ကျေးဇူးတင်စကား!
က Check နှင့်ကောင်းစွာပဲအင်ဒိုနီးရှားမှစေလွှတ်ခဲ့သည်။
ရသည်မှာကိုစေလွှတ်လျက်ရှိကြောင်း Excel ကိုယူနစ်နှင့်ယူနစ်များအကြားတစ်ဦးဆန့်ကျင်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်က Control Panel ထဲကဒေသအတွက်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Point သည်ဒဿမ separator ထောင်ပေါင်းများစွာ separator ကော်မာသည်နှင့်လည်း separator စာရင်းပြုစုကော်မာကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
ကိုသြဒိနိတ် X ကိုမှာ 792713.85
အဆိုပါ Y ကိုအတွက် 1127836.33 coordinate
'အမှား' ၁၃ 'ပြေးချိန်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သင့်အနေဖြင့်ပုံစံအတွက် data တွေကိုရေးသင့်ပါတယ်:
ငါကြိုးစားကြည့်ပါ။ အဆိုပါ template ကို decimal ခွဲခြားရန်ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်အစက်ခွဲခြားရန်ကော်မာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်သောကြောင့်, သင်ကကောင်းစွာအသုံးပြုရမည်။
VD-0 792.713,85 1.127.836,33 19 N ကို
VD-1 792.680,07 1.127.822,15 19 N ကို
VD-2 792.528,78 1.127.833,33 19 N ကို
VD-3 792.301,83 1.127.895,05 19 N ကို
VD-4 792.191,63 1.127.895,05 19 N ကို
ငါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြုကြသောအခါ, ငါသည်ဤသြဒီနိတ်ပေးပို့အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ဗင်နီဇွဲလား၏ Bolivarian သမ္မတနိုင်ငံ, မည်သည့်အကြံပြုချက်များရှိပါသလဲ
Ramirez Yorodis သူ says:
သူတို့ကငါ့အလိုရှိသမျှမေးခွန်းများကိုဖြေကြားခဲ့ကြ .. !!
ဧလိယ Gonzalez သူ says:
run-time အမှား '75':
path / File ကို Access ကိုမှားယွင်းနေသည်
drive ကိုမည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲလမ်းကြောင်းပြောင်းနေသည်ထုတ်ပေး: ငါကို C မှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသောအနားထုတ်ပေးလုပ်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏အမိန့်မြောက်ပိုင်း, အရှေ့ (လတ်, Long က) ဖြစ်ပါသည်သိမြင်, ဇောက်ထိုးသူတို့ကိုဝင်နေကြတယ်
အဆိုပါ template ကိုအမိန့်အရှေ့မြောက်ပိုင်း (Long က, လတ်) ၌ရှိ၏နေစဉ်။
ငါ auditioned နှင့်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ဧရိယာသို့ကျရောက်, ထပ်ကြိုးစားကြည့်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့။
ငါများသောအားဖြင့်အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုဖြစ်သည့်ရှည်လျား LAT ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကိုသြဒီနိတ်၏အမိန့်တစ်ခု update ကိုလုပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ပါဘဲ။
ဤတွင်ကျွန်မအောက်ပါ parameters တွေကိုနှင့်အတူဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံမှာယူနေတဲ့လယ်ကွင်းကိုသြဒီနိတ်ထားခဲ့ပါ:
ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် .. !!
Google Earth ရဲ့ orthophotos ကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲအတူအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ဒါကြောင့် template ကိုအတူသငျသညျကိုသိသောကိုသြဒီနိတ်ထုတ်လုပ်ဖို့ကြောင့်သူတို့ Datum WGS84 အတူ template ကိုကနေ export အရာကိုကိုက်ညီလျှင်ကြည့်ဖို့, ရှိုးများ Google Earth ကိုသြဒိနိတ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
အဘယ်အရာကိုအရေးပါသည့်တစ်ဦး miscalculation ရှိခြင်း စိုးရိမ်. တရားဝင်ပွဲ coordinate ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့ညှိနှိုင်းပေမယ့်ရုပ်ပုံအနေဖြင့်ထေဖြစ်ပါတယ်ကိုက်ညီပါကအမှားပုံရိပ်ကိုကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုလမ်းငါအခမဲ့အသုံးပြုမှုအတွက် template ကိုထုတ်ပေးပေမယ့်မှတ်ချက်တွေကိုပြန်ကျွေးဖို့ငါ့ကိုလိုအပ်တယ်ကြသကဲ့သို့သင်တို့ကိုသူတို့ရှာတွေ့အားနည်းချက်များကိုသတင်းပို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။
နောက်တစ်နေ့အဆင့်အနား generate မှဖြစ်လိမ့်မယ်, ငါတို့အခြားဆောင်းပါးထဲမှာတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။
ဤဆောင်းပါးကိုပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်ဒေသခံ directory ကိုလမ်းကြောင်းနေရာ
အဆိုပါဖိုင်ကို C အနေအထား /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png သောယူဆရင်, ထို့နောက်ကုဒ်ပါလိမ့်မယ်:
src = »ဖိုင်: /// C: /Users/User/Downloads/woopra_ios.png »
သင့်ရဲ့ဧရိယာ 19 အတွက်ပြောင်းကုန်ပြီဘယ်လောက်ပါလဲ?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုရေးဖို့နိုင်လျှင်တစ်ဦးစိစစ်အတည်ပြုဘို့, coordinate ။
ဒါဟာသင်ကို C ရေးအဘယ်သူမျှမပိုင်ခွင့်ရှိသည်သောအထင်အမြင်ပေးသည်:
သငျသညျသေချာသင် WGS84 အသုံးပြုနေသည်?
Check, မသင့် system လျှင်ဤတိုင်းပြည်အချို့အယူမှားရှိပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရေးဖို့မင်းဆေးခြောက်စီးကရက်ကိုသောက်ရမယ်။ Hehe ။
မားကို့စ Diaz သူ says:
အဆိုပါ input ကိုကျေးဇူးတင် .. Excellent က .. !!
(အဘယ်ကြောင့် egeomates ??)
ငါဒေသခံတစ်ဦးက directory ကနေဓါတ်ပုံများကိုလွှတ်တင်၏လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်နေတာခံခဲ့ရသည်နဲ့ကျွန်မဝဘ် directory မှဓာတ်ပုံများတက်သို့ပွေးလေ၏လျှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကဤနည်းအားမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုပိုမိုအသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်လျှင်, ကျေနပ်ဖွယ်ကောက်ချက်ချလို့မရဘူး။
သူလည်းဇုန် 19N နဲ့ကျွန်မလုံးဝအိုးအိမ်မဲ့ကျဆင်းဒေတာအတွက်သြဒီနိတ်မိတ်ဆက်ပေးသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်တွေအများကြီး .. !!
လှည့်လည် Santana သူ says:
UTM သြဒီနိတ်ငါ၏စာရင်းထဲတွင်, ကမ္ဘာ့မြောက်ပိုင်း 19 ဇုန်နှင့်အတူအထူးဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ, ကဧရိယာ၌ဤသြဒီနိတ်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးအိုးအိမ်မဲ့ကျရောက်ပါတယ်။ ငါတော်တော်များများအခါသမယအပေါ်ဖြစ်စဉ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲကွဲပြားခြားနားသောဒေတာများနှင့်ရလဒ်အတူတူပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ၏အစိုးရိမ်ပူပန်တာကိုကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါထင်, ငါသည်ဤ template ကို၏2ဗားရှင်းပါလိမ့်မယ်ထင်နှင့် AutoCAD အချက်များနှင့် Plines ဖို့သူဌေးကလုပ်ခဲ့တယ်
ငါ macros ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ vertices တွေနဲ့ polygon ထုတ်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူလိမ့်မယ်။ လေးစားစွာဖြင့် …